AMBALAKINDRESY - DAHALO NANAFIKA : Roa maty voatifitra, telo azo sambo-belona
Noho ny fahazoana haingana ny loharanom-baovao nomen’ireo olon-tsotra an’ny mpitandro filaminana dia nisy vokatra nahafa-po ny fokonolona tao Maroavaratra Fokontany Andrainafototra Kaominina Ambalakindresy, Faritanin’i Fianarantsoa teo aloha ny faran’ny herinandro lasa teo. 15 octobre 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray dia dahalo miisa telo no voasambotra raha toa ka nindaosin’ny fahafatesana kosa ny roa tamin’ireo nandritra ny tifitra variraraka tamin’ny fifandonana. Voalaza mantsy fa nifanena tany anaty kizo ireo dahalo am-polony mitam-piadiana sy ny mpitandro filaminana nampandry fahalemana tao an-toerana voalaza etsy ambony, ny marainan’ny 12 oktobra.
Marihina fa vao niainga kely tao Besora hanao fisafoana amin’ny faritra manodidina ireo mpitandro filaminana rehefa nahazo vaovao fa misy fanafihana ao Maroavaratra dia efa voafitaka ireo dahalo tamin’ny fotoana nitsoahana ka mora foana ny nisamborana azy ireo. Noheverin’ireto dahalo mantsy fa lasa tsy hitampody ireo zandary ka dia raikitra ny fifandonana.
Efa nivonona hatramin’ny farany hiady tamin’ireo andian’olon-dratsy rahateo koa ireo zandary tamin’io fotoana io, hany ka tsy dia nananosarotra azy ireo ny nifanandrina tamin’ireo andian-dahalo. Nisaotra ny fokonolona araka izany ireto farany tamin’ny fanomezana vaovao sy fiaraha-miasa hentitra teo amin’izy ireo. Mbola manentana fiaraha-misalahy hatrany hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana ny avy amin’ny mpitandro filaminana.